Dhabbadii xukunka iyo dhiciddii Anna Kinberg Batra - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Published fredag 1 september 2017 kl 12.36
Diilinta wakhtiga: Muddadii ay Anna Kinberg Batras haysay xilka hoggaamiyaha xisbiga
Culeeysyo dhowr ah oo marar kala duwan kaga yimid xubnaha xisbiga ayay ku khasbanaatay inay jagada hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna iska casisho Anna Kinberg Batra. Dhacdooyinkii ay soo martay illaa iyo is casilaaddii.
14 seb 2014
Fredrik Reinfeldt ayaa iska casilay kursigii hoggaanka xisbiga Moderaterna kadib garabka midig ee Alliansen oo lumiyay kursigii awoodda dalka. Xisbiga ayaa lumiyay qiyaastii 7% taageeradii bulshada, isagoona helay taageero dhan 23,3%.
Lala doortay howlo hor yaaley
Tomas Ramberg-iga Ekot ayaa sidan uga faallooday howlaha hor yaaley Anna Kinberg Batra: "Howsha ugu horreeysa ee hor-taala hoggaamiyaha cusub ee xisbiga loo doortay waxay tahay sidii ay uga hor-tegi lahayd garabka qun-yar socodka ah ee xisbiga ee aarsi doonka ah oo ay neecawdu u soo bidhaantay wixii ka dambeeyay heshiiskii diseembar. Doodda xisbiga ka dhex aloosan ayaa dusha uga muuqda inuu ku saab-san yahay heshiiskii ciiddii Krismaska, hase yeeshee daboolka ka qaaday guux hoosta ka socday iyo doodo horay u jirey ee la xiriiray xeerarka shaqada, siyaasadda difaaca, canshuuraha iyo siyaasadda socdaalka."
Dhabba cusub ee siyaasadda soo-galootiga
Xisbiga Moderaterna ayaa soo ban-dhigay qorshooyin cusub ee wax looga bedelayo siyaasadda is dhex-galka Sweden, oo ay ka mid tahay in la bixiyo sharci deggenaansho ku meel gaar ah, halkii laga bixin jirey sharci joogto ah. Qorshahan ayaa ka dhignaa in laga weecday dhabbadii hoggaamiyihii ka horeeyay Reinfeldt, sida uu sheegay Fredrik Furtenbach oo ka faalooda siyaasadda gudaha.
Heshiiskii DÖ oo la xabaalay
Kulan waynihii xisbiga KD waxaa lagu go’aansaday in laga baxo heshiiskii bishii diseembar 2015. Anna Kinberg Batra ayaa shaaca ka qaaday in heshiiskaasi oo xisbiyada garabka midig ka hor-taagnaa sidii ey miisaaniyaddooda ugu codeeyn lahaayeen inuu burburay. 19 jan 2017
Albaabka u furtay wada-hadal xisbiga SD
Xisbiga Moderaterna ka baaq-san maayo wada-hadal uu la yeesho xisbiga SD, sida ay shaacisay Kinberg Batra. Waxay doonaysay inay soo ban-dhigto miisaaniyad garabka midig oo taageero ka helaya xisbiga SD iyo sidii loo ridi lahaa xukuumadda fälla regeringens budget. Xisbiyada xulufada ee C iyo L oo ka soo hor jeestay fikirkaa , iyo inaan wada shaqeeyn lala yeelan xisbiga SD.
SD oo taageeradiisu dhaaftay
Markii ugu horreeysay ayuu xisbiga Sverigedemokraterna ka taageero batay xisbiga Moderaterna tira-koob ay sameeysay laanta warar ee Ekot, Xisbiga SD ayaa galay kaalinta labaad ee taageerada bulshada ee xisbiyada. Isla markaa iyadoo xisbigu galay kulan.
Shuruuddii ugu horreeysay ee is casilaadda
Markii ugu horreeysay ee shuruud is casilaad ay uga timaado Anna Kinberg Batra xubno sare ee cod ku leh xisbiga waxay ka soo gaartay hoggaamiyaha laanta goboleedka xisbiga Moderaterna ee Östergötland, Christian Gustavsson. Anna kuma wanaag-sana inay hayso xilka iminka xilka hoggaanka xisbiga Moderaterna.
2 juun 2017
Is bedel lagu sameeyey hoggaankii xisbiga
Dhaleeceeyntaa dabadeed waxay Anna Kinberg Batra ay is bedel ku sameeysay qaar ka mid ah hoggaankii xisbiga. Beatrice Ask, af-hayeenka xisbiga ee shuruucda, iyo Tomas Tobé, xog-hayehii xoisbiga, ayaa is bedel lagu sameeyey, hase yeeshee iyadu ku nagaatay kursigii, iyadoo weliba ballan qaaday laba kacleeyn inay sameeyso.
26 jul ay2017
Kalsooni dheeri ah kuma helin kalsooni kala noqoshadii
Garabka Alliansen ayaa ku dhawaaqay iney dooneyaan iney kiciyaan kalsooni kala noqosho saddex ka mid ah golaha wasiirrada oo loo eedeeyey habkii loo maareeyey fadeexaddii IT-ga ee hoggaanka hayadda gaadiidka. Muddo yar dabadeed saadaalin taageero la sameeyey ayey horay u kaceen dhammaan hoggaamiyeyaasha garabka midig, marka laga reebo Anna Kinberg Batra.
22 agoo 2017
Shuruud kale ee is casilaad
Mar labaad ayay soo baxeen shuruudo kobcaya ee lagu diidan yahay ama lagaga soo hor-jeedo hoggaanka Kinberg Batr. Laanta wararka Ekot ayey soo gaareen warar sheegeya diidmo ka soo wajahday gaar ahaan laamaha gobollada Stockholm iyo magaalada Stockholm. Pehr Granfalk, ahna xil-dhibaan degmada Solna waa xubinta keliya ee si muuqata u diiddanayd aannana ugu qanacsanayn. Iilama muuqato inuu warkeedu ka caddaaday, kuma aanay guuleey-san inay suuq geeyso oo iibiso siyaasadda xisbiga hab wanaag-san, sida ku cad tira-koobyada, marka dhankayga kalsooni kama jirto.
"Ku fekeri maayo inaan xilka iska casilo"
Anna Kinberg Batra ayaa ugu jawaabtay dadyoowgii dhaleeceeynta u soo jeediyey in aanay ku talo jirin xilka inay isaga degto, mar ay wareeysi siisay war-geeyska maalinlaha ee Aftonbladet.
24 agoo 2017
Laamo kale oo shuruudda dhinac ka galey
Gotland ayaa noqotay laantii shanaad ee shuruudda is casilaadda ku biirta. Maalintaa waxaa ku soo biirey laamo kale oo guud ahaan gaarey 11 laammood, sidoo kale ururka dhallin-yarada xisbiga Moderaterna.
25 agoo 2017
Anna Kinberg Batra oo is casihay
Subax-nimadii ayuu hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna ugu dambeeyn isugu yeertay shir jaraa’id, iyada oo ku dhawaaqday inay is casishay. Xaaladda aan iminka ku sugannahey kuma qanacsani. Maadaama uu hoggaamiyaha xisbigu leeyahay masuuliyadda ugu ballaaran kuma qanac-sani aniga qudheeydu sida aan hoowsha illaa iyo hadda uga soo dhalaalay.